🥇 Inkqubo yesikolo semidlalo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 884
Inkqubo yesikolo semidlalo
Ividiyo yenkqubo yesikolo semidlalo
Uku-odola inkqubo yesikolo semidlalo
Ukusebenza ngeenkqubo ezahlukeneyo, uhlala unethuba lokudideka, kwaye, ngenxa yoko, umsebenzi wesikolo sezemidlalo uphazamiseka ngokulula. Sonke sijonge inkqubo yezikolo enye yezemidlalo, eya kuthi ibe nayo yonke imisebenzi ye-accounting yesikolo semidlalo. I-USU-Soft yinkqubo yesikolo yezemidlalo, eyilelwe ukusebenza ngemisebenzi eyahlukeneyo ekufuneka isetyenzisiwe kwiziko elinjalo. Ukulawulwa kwesikolo semidlalo kunokwenziwa ngoncedo lwamathuba amaninzi kunye nemisebenzi yenkqubo yocwangciso-mali nolawulo, ngokulawula ngokukuko isenzo ngasinye ngokwahlukeneyo. Ukusebenziseka kwenkqubo yesikolo sezemidlalo kukunxibelelana okulula, apho uya kusebenzisa kuphela iithebhu ezintathu eziphambili: iimodyuli, imikhombandlela kunye neengxelo.
Ukuzenzekelayo kwesikolo sezemidlalo linyathelo elikhulu eliya kwikamva. Kwisikolo sezemidlalo wahlulahlula izinto phakathi kwesiqhelo kunye nexesha elinye, njengengxelo yemali yenyanga. Ulawulo lwesikolo sezemidlalo ludinga ukuqwalaselwa. Nje ukuba ugcwalise ulwazi olufunayo, ngokulula ugcwalisa naziphi na iishedyuli, izicwangciso, okanye iingxelo. Inkqubo ye-accounting kunye nolawulo yesikolo semidlalo ngokuzenzekelayo. Emva kokuba uvelise idathabheyisi yolwazi kube kanye, uyakufumana ngokulula nakuphi na ukubala, izicwangciso okanye iishedyuli ezenziwa yinkqubo yokulawula ukuzenzekelayo ngokuzenzekelayo! Ulawulo lwesikolo sezemidlalo lucwangcisiwe xa uqala ukusebenzisa le nkqubo yolawulo lomgangatho kunye nophuhliso lombutho weshishini. Inkqubo yesikolo semidlalo iba ngumncedisi ophambili kwizigqibo nakwizenzo zakho! Akukho nto inzima kulawulo lwesikolo semidlalo ngenkqubo. Inkqubo ye-USU-Soft yokunikwa kwengxelo ikunceda ukuba umelane nenkqubo yesikolo sezemidlalo ngokulula, ngokukhawuleza, ngokulula!
Usebenzisa inkqubo yekhompyuter kungekuphela nje ekuhlaleni, kodwa nakwinethiwekhi. Oku kuluncedo kubaphathi nakubasebenzi- imisebenzi yenethiwekhi yesebe iyadityaniswa, kwaye uqhagamshela kwindawo yogcino lwedatha kwaye wenze umsebenzi naphina emhlabeni. Wonke umntu unako ukusebenza kule nkqubo ngenxa yokuba zonke iinkcukacha kwi-interface yenkqubo zicingelwa. Inkqubo yesikolo sezemidlalo inokuyilwa unokhetho lwakho lobuqu engqondweni - kukho imixholo engaphezulu kwesitayile engaphezulu kwamashumi amahlanu. Ukuphucula umfanekiso wenkampani kulungiswa ngokulula ukuba uthatha isigqibo sokufaka le nkqubo yolawulo lobalo. Iqinisekisa ukubakho, ukuchaneka kunye nokugqibelela kwalo lonke ulwazi kwaye yenza kube lula ukulawula iintlobo ezahlukeneyo zoqeqesho kunye nokuzilolonga kwindawo yakho yokomelela komzimba. Iingxelo zemali malunga nenkampani yakho zinceda ukucwangcisa imisebenzi yombutho kwaye zikhuthaze abasebenzi besebe lezentengiso. Ukuzenzekelayo kuyanceda ukunqanda iimpazamo ezingenangqondo ezinxulunyaniswa nefuthe lezinto zomntu kwaye zonyusa ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza kakuhle kolawulo. Ukwenza isicwangciso kunye nolawulo kwinkampani yakho, kubaluleke kakhulu ukusebenza nelogo. Ilogo yenkampani yakho inokufakwa kwiwindow ephambili yale nkqubo, kwaye iya kubonakala kuzo zonke iingxelo kunye namaxwebhu ayenziweyo aze aprintwa kusetyenziswa iUSU-Soft. Isicelo songeza ilogo kunye neenkcukacha zeziko lakho lokomelela kwingxelo nganye, eyenziwe nguwe. Inkqubo yolawulo inonxibelelwano lweefestile ezininzi kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Xa usebenza ne-USU-Soft, ungatshintsha phakathi kweefestile kwiithebhu ezibekwe ezantsi kwesikrini. Sinikezela ngeempawu ezinjengolwazi kunye nokulula kweendawo zethu zokusebenza. Unokufihla nayiphi na ikholamu kwitafile nganye ngonqakrazo oluncinci ukwenza umsebenzi wakho ukhululeke kwaye ulahle izithuba ongazisebenzisiyo. Inkqubo yokuzenzekelayo yokujonga abasebenzi kunye nempumelelo yokuphumelela ivumela umsebenzisi ukuba atshintshe ngokulula i-odolo yeekholamu- oku kwenziwa ngokurhuqa okuqhelekileyo kunye nokwehla ngesikhombisi semouse. Isicelo sinokutshintsha ngokulula ububanzi beekholamu. Isoftware inokusetyenziselwa ukuthengisa- kuseto awunokutshintsha kuphela ilogo kodwa kunye negama, iinkcukacha kunye nolwazi lokunxibelelana. Ngayo ungonga ixesha ekugcwaliseni amakhadi abaxumi - khuphela nje ungeniso olwahluke kancinane kuleyo ufuna ukungena kuyo, tshintsha iinkalo ezifunekayo kwaye ugcine. Kwimenyu ephambili, umsebenzisi ufumana amacandelo amathathu aphambili- Iingxelo, iimodyuli, izalathiso.
Imikhombandlela igcwaliswa kube kanye, iiNgxelo zisetyenziswa ngabaphathi (abalawuli okanye abaphathi), kwaye iimodyuli zisetyenziselwa umsebenzi wemihla ngemihla. Inani lezifundo ezenziweyo kule nkqubo lilinganiselwe kuphela kwimemori ekhoyo kunye namandla eziko lakho lezemidlalo. Ukuzenzekelayo kwikamva! Kwaye ukuze ube nokhuphiswano ngakumbi kwaye udlule kubo bonke abakhuphisana nabo, ishishini lakho liya kufuna inkqubo elungileyo yokuphendula ngazo zonke izinto ezenziwayo kumbutho wakho. Sikucebisa ngenkqubo yethu ye-USU-Soft, eyamkelwa njengenye yeenkqubo ezilungileyo ngokwemigangatho yamanye amazwe.
Ukuziva wonwabile kunye nenjongo ebomini, umntu kufuneka enze izinto ezenza ukuba akhululeke kwaye athule ingqondo yakhe. Ezi zinto zinokwahluka, kodwa inye, nangona kunjalo, yeyonke kwaye inokuthiwa ngaye nawuphi na umntu ehlabathini: umthambo wezemidlalo. Isenza sizive siphila kwaye silawula ngakumbi imizimba yethu. Njengokuba kukho iijingi ezininzi namhlanje, esi sikolo semidlalo sidinga into eya kusinika isibonelelo kunye nazo zonke izibonelelo. I-USU-Soft inokuba yenye yazo, njengoko zonke iimpawu ezifunekayo koku.
Ezemidlalo kunye nemisebenzi
Ukwenza ingxelo yeklabhu yokomelela komzimba
Ukwenza i-accounting yesikolo sezemidlalo
Ukwenza ingxelo kwiiklasi zamaqela ezikolo zemidlalo
Ukwenza accounting kwezemidlalo
Ukwenza ingxelo echibini
accounting kwiziko lokuzilolonga
Ijenali yobalo ngezifundo zemidlalo
Ukwenza ingxelo ngoqeqesho lweembaleki
Ukwenza iingxelo ngezifundo zeqela
Ukwenza ingxelo yeetikiti zamaxesha
Inkqubo yeAccounting yokomelela komzimba
Ukuzenzekelayo kweklabhu yokomelela komzimba
Ukulawulwa kwisikolo sezemidlalo
Ulawulo lombutho wezemidlalo
Ulawulo lweklabhu yokomelela
Ijenali yezifundo zobalo-zincwadi
Ulawulo lweklabhu yokomelela komzimba
Ulawulo lweqela lezemidlalo
Inkqubo yokuphicothwa kweklabhu yokomelela komzimba
Inkqubo yeklabhu yokulwa
Inkqubo yeklabhu yokomelela komzimba
Inkqubo yegumbi lokuzilolonga
Inkqubo yeziko lezemidlalo
Inkqubo yeklabhu yezemidlalo
Inkqubo yeziko labantwana
Inkqubo yeklabhu yabantwana
Inkqubo yamakhadi eplastiki
Inkqubo yolawulo lwamachibi
Inkqubo yetikiti lonyaka
Inkqubo yombutho wezemidlalo
Inkqubo yecandelo lezemidlalo
Inkqubo yamakhadi eeklabhu
Inkqubo yesikolo sezemidlalo
Inkqubo yokuphicothwa kweencwadi zemali
Inkqubo yokuphicothwa kwezemidlalo
ezemidlalo iklabhu yezemidlalo
Intshatsheli yezoqoqosho kwezemidlalo
ulawulo lwezemidlalo olunzima
Umbutho wezeMali accounting
Ulawulo lwesikolo sezemidlalo
Incwadana yemifanekiso yoqeqesho
Sebenzisa amakhadi eplastiki